တံတားဦးစီးဌာန၏ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့န...
တံတားဦးစီးဌာန၏ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလတံတားဘေးရှိ မြေဧရိယာစတုရန်းပေ (၃၄၀၀၀) အား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် မြေနေရာငှားရမ်းရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၏ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလတံတားဘေးရှိ မြေဧရိယာစတုရန်းပေ (၃၄၀၀၀) အား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် မြေနေရာငှားရမ်းခြင်းအတွက် (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။တင်ဒါ...
Posted Date :25-Feb-2019
Expire Date :04-Mar-2019
အုတ်တွင်းမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်မည့် လု...
အုတ်တွင်းမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း (၅)ခုအတွက် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂အုတ်တွင်းမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ အထိ) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း (၅)ခုအား ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပြီးစီး အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေ...
Expire Date :10-Mar-2019
အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံ(ဟားခါး)ကို တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်နု...
အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံ(ဟားခါး)ကို တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်နိုင် ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ချင်းပြည်နယ်၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ဟားခါးမြို့၊ မြို့ဟောင်းရပ်ကွက်၊ ဟိုင်တလန်ရပ်၊ ရေကူးကန်အနီးတွင် အားက စားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံ (ဟားခါး)ကို တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် သင်တန်းကျောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ နှစ်ထပ် စာသင်ကျောင်း၊ သင်တန်း သား/သူ အိပ်ဆောင်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးနေအိမ်၊ စ...
Posted Date :22-Feb-2019
Expire Date :22-Mar-2019
ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများအတွက် လိုအပ်သောဘိလပ်မြေ (၉၃၄၇...
ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများအတွက် လိုအပ်သောဘိလပ်မြေ (၉၃၄၇) တန်နှင့် သံချောင်းလုံး (၁၀၀၀)တန်အား ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံ ကိန်းများအတွက် လိုအပ်သောဘိလပ်မြေ (၉၃၄၇) တန် နှင့် သံချောင်း လုံး (၁၀၀၀)တန်အား D.D.P (at Site)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလို ပါသဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။(က) Tender No. 15/DHPI/Cement/2018-2019( ခ) Tender No. 16/DH...
Posted Date :20-Feb-2019
Expire Date :19-Mar-2019
TCL TV Showroom အတွက် TV Stand များ customized ဝယ်ယူလို...
TCL TV Showroom အတွက် TV Stand များကို customized ဝယ်ယူလိုပါတယ်။Showroom သို့လာရောက် serveyကောက်ပေးပြီး တွက်ချေက်ပေးရပါမည်။
Posted Date :19-Feb-2019
Expire Date :08-Mar-2019
ရေသန့်ဗူးခွံ 20 L ဗူးခွံ အလုံးပေါင်း ၁ဝဝဝ ဝယ်ယူလိုခြင်း
ရေသန့်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် 20L ရေသန့်ဗူးခွံ ဝယ်ယူလိုခြင်း အရေအတွက် = ၁ဝဝဝဗူး
Posted Date :24-Feb-2019
Expire Date :24-Feb-2019
နေပြည်တော်အုတ်စက်ရုံ (ပန်းတင်)အား ပြည်တွင်းပြည်ပ ပုဂ္ဂလိ...
နေပြည်တော်အုတ်စက်ရုံ (ပန်းတင်)အား ပြည်တွင်းပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကုမ္ပဏီများသို့ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းခြင်း (Leasing) ဆောင်ရွက်သွားရန် EOI ခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ပန်းတင်ရွာအနီးရှိ နေပြည်တော်အုတ်စက်ရုံ (ပန်းတင်)အား ပြည်တွင်းပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကုမ္ပဏီများသို့ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းခြင်း (Leasing) ဆောင်ရွက်သွားရန် စိတ်ဝင်စား သူများအား...
Posted Date :18-Feb-2019
Expire Date :16-Feb-2019
ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်နှင့် ဘော်လခဲခရိုင်အတွင်းေ...
ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်နှင့် ဘော်လခဲခရိုင်အတွင်းဆောင်ရွက် မည့် တံတားသုံးစင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ် သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ လုပ်ငန်းခွင်အရောက် ၀ယ်ယူခြင်းနှင့် Bored Pile Gif တူးခြင်းလုပ်ငန်းတို့အတွက် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာ၊ တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (၂)၊ တံတားအထူးအဖွဲ့ (၆)၊ နေပြည်တော်မှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေနှင့် ကယားပြည်...
ရခိုင်ပြည်နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနက မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အအု...
ရခိုင်ပြည်နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနက မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အအုံ (၂)လုံး တည်ဆောက်ရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်နှင့် မြေပုံမြို့နယ်တို့တွင် ဒီရေရောက်သစ်တောများ စနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း စီမံကိန်း (ဒိန်းမတ်) ရန်ပုံငွေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်...
Expire Date :15-Mar-2019
Office Table ဝယ်ယူလိုခြင်း
Office Table (ကြိတ်သား) Size =6'X3'
Expire Date :20-Feb-2019
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဥပေဒချုပ်ရုံးမှ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဥပေဒချုပ်ရုံးမှ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဥပေဒချုပ်ရုံးမှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။(က) မင်းတုန်းမြို့နယ် ဥပဒေရုံးနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (RC ၂ ထပ်၊ ၅၀ ပေx ၄၆ ပေ x ၂၄ ပေ၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်မီး၊ မိလ္လာ အပါအ၀င်)( ခ) နတ်မောက်မြို့နယ်ဥပဒေရုံး...
Expire Date :07-Feb-2019
ဖြူစင်သန့် သရက်ခြံလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် Carton Box မ...
ဖြူစင်သန့် သရက်ခြံလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် Carton Box များဝယ်ယူလိုပါသည်။ Carton Box လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် [email protected] သို့ Quotation ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ရေးမြို့နယ်ရှိ ရေးရိပ်သာအဆောက်အအုံ အပါအ၀င် မြေနေရာ အကျယ...
ရေးမြို့နယ်ရှိ ရေးရိပ်သာအဆောက်အအုံ အပါအ၀င် မြေနေရာ အကျယ်အ၀န်း (၀ဒသမ၈) ဧကအား (၅)နှစ်သက်တမ်း ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်ရှိ ရေးရိပ်သာအဆောက်အအုံ အပါအ၀င် မြေနေရာ အကျယ်အ၀န်း (၀ဒသမ၈) ဧကအား မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ငှားရမ်းသက်တမ်းကာလ (၅) နှစ်သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံတော်မှ တရားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော...
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတွင် ဆောင်ရွက်မည့် လမ်း၊တံတား၊ေ...
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတွင် ဆောင်ရွက်မည့် လမ်း၊တံတား၊ ရေ မြောင်းနှင့် မြေထိန်းနံရံလုပ်ငန်း (၁၇) ခုအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်ကောင်စီ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လမ်း၊တံတား၊ ရေ မြောင်းနှင့် မြေထိန်းနံရံလုပ်ငန်း (၁၇) ခုအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်မှာ (၁၅.၂.၂၀၁၉) ရက် ဖြစ်ပြီး (၁၅.၃.၂၀၁၉) ရက...
Posted Date :15-Feb-2019
လမ်းခင်းရာတွင်အသုံးပြုရန် Engine Type Handheld Air Blow...
လမ်းခင်းရာတွင်အသုံးပြုရန် Engine Type Handheld Air Blower ဝယ်ယူလိုခြင်း အရေအတွက် = ၆ လုံး အမျိုးအစား = အင်ဂျင် Made = Thailand Brand ဆက်သွယ်ရန် - 09-771204661
Expire Date :15-Feb-2019
ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ရုံများဌာန လက်ေ...
သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့တွင် အသုံးပြုရန် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး IHC (Immuno Histo Chemistry) Reagent များ ၀ယ်ယူ ရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၉ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့တွင် တက်ရောက်ကုသလျက်ရှိသော လူနာများအား ကုသပေးရန် လိုအပ်သော ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး IHC - (Immuno Histo Chemistry ) Reagent များကို မြန်မာငွေကျပ်ဖြင့် ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ဈေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာပ...
Posted Date :11-Feb-2019
Expire Date :07-Mar-2019
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်းရှိပြီး တုပပြုလုပ်မှုကို ကာကွယ်နိုင်သည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ရပ်ဖြစ်သော ကုန်စည်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အခွန် အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်းရှိပြီး တုပပြုလုပ်မှုကို ကာကွယ်နိုင်သည့် အခွန်အမှတ်တံ...
Expire Date :01-Mar-2019
မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ခြံ/စက်ရုံ...
မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ခြံ/စက်ရုံ (၃)ခု တို့အားနှစ်ရှည်ငှား၇မ်းရန် တင်ဒါအဆိုပြုလွှာခေါ်ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၀စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ခြံ/စက်ရုံ (၃)ခု တို့အား နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ လုပ်ငန်း ရှင် ကုမ္ပဏီများသို့ နှစ်ရှည်ငှား...
Expire Date :11-Mar-2019
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ စက်သုံးဆီနှင့် Marine Paint...
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ စက်သုံးဆီနှင့် Marine Paint (8) Items ပစ္စည်းများအား ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ စက်သုံးဆီနှင့် Marine Paint (8) Items ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။စက်သုံးဆီများဖြစ်သည့် ဒီဇယ်ဆီ၊ ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ နှင့် ဓာတ်ဆီ (Octane-92) တို့အတွက် တင်ဒါပုံစံများကို (၈.၂.၂၀၁၉) ရက်မှ...
ဗန်းမော်တက္ကသိုလ်တွင် အရာထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ရန် တင်ဒါခေါ်
ဗန်းမော်တက္ကသိုလ်တွင် အရာထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဗန်းမော်တက္ကသိုလ်တွင် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် အရာထမ်းအိမ်ရာ သံကူကွန်ကရစ်အဆောက်အအုံ ကျောခြင်းဆိုင် နှစ်ခန်းတွဲနှစ် ထပ် တည်ဆောက်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ယင်းလုပ်ငန်းအတွက် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလိုင်စင်ရဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအား အိတ်ဖ...
Posted Date :29-Jan-2019
Expire Date :28-Feb-2019